Pireezidantiin Sudaan Kaabinee isaanii diigan - BBC News Afaan Oromoo
Sudaan mormiiwwan riifoormiin Siyaasaa fi Diinagdee akka gaggeefamu gaafataniin jeeqamaa baate.
Gaaffiiwwan kanaaf deebii kennuuf jecha pireezidantiin biyyattii Omaar Albashiir Kaabinee isanii diiganiiru. Rakkoo diinagdee isaanii miidhe furuu akka barbaadaniis himaniiru.
Itoophiyaatti ibsaan gutuu biyyaatti badee ture sirraa'e jedhame
Murtee Al Bashiir kanaan waajiraaleen sadarkaa Ministeeraatti hundaa'anii tura 31 gara 21 gadi hir'ifamu.
Gatiin daabboon itti gurguramu deegarsi maallaqaa mootummaan gama kaanaan kennu adda cituu hordofuun dachaan dabaluu sababeefachuun mormiin kan eegale Mudde darbe ture.
Sharafni maallaqaa biyyattii, paawundiin Sudaan, gadi bu'uun meeshaalee alaa bitamanii galan akka qamadii rakkisaa taasiseera.
Xiinxaltootni kan jedhan bara 2011 erga Sudaan Kibbaa tokko sadaffaa qabeenya bob'aa naannichaa fudhachuun biyya of dandeesse erga taateen booda diinagdeen Sudaan rakkoo keessa galeera.
Nuuraa Huseen abbaa warraashe albeedhaan waraantee erga ajjeesteen booda manni murtii Islaamaa du'an akka adabamtu murteessee ture.
Sababii cabiinsa to'annoo hidhicha mudateen ibsaan adda citee ture
Adda citiinis ibsaa kunis sababii dogongora techinicaatiin hidha Gibe sadii irra qaqabeen kan mudateedha.